State Counsellor receives Thai Minister of Foreign Affairs – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
State Counsellor receives Thai Minister of Foreign Affairs
Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor of the Republic of the Union of Myanmar, received H.E. Mr. Don Pramudwinai, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand at the Ministry of Foreign Affairs in Nay Pyi Taw on 14 August at 15:00 hrs., during his visit to Myanmar to attend the 9th Meeting of Joint Commission for Bilateral Cooperation between Myanmar and Thailand, and the 70th Anniversary of the establishment of diplomatic relations between the two countries.
During the meeting, the State Counsellor and the Minister of Foreign Affairs of Thailand discussed various issues ranging from promoting bilateral relations, economic and socio-cultural cooperation; enhancing the bilateral relations between Myanmar and Thailand to the “Natural Strategic Partnership”; doubling the current bilateral trade volume by 2022; working continuously for the legal employment of Myanmar migrant workers and their due entitlements; opening of the 2nd Myanmar-Thailand Friendship Bridge for better connectivity; strengthening the exchanges between the Provinces/States and Regions along the border; implementing of modern villages project based on agriculture, livestock and farming to contribute to the efforts of the Myanmar Government for the development of Rakhine State; promoting people-to-people contacts and tourism with agriculture, livestock and farming; and exploring possible ways to further expand the multi-faceted cooperation in both bilateral and regional contexts.
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ထိုင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
(၁၄-၈-၂၀၁၈ ရက်၊ နေပြည်တော်)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် (၉)ကြိမ်မြောက် မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ပူးတွဲကော်မရှင် အစည်းအဝေးနှင့် မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံအကြား သံတမန်ဆက်သွယ်မှု ထူထောင်သည့် နှစ်(၇၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသည့် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မစ္စတာ ဒွန်ပရာမွတ် ဝီနိုင်းအား ၁၄-၈-၂၀၁၈ ရက်၊ (၁၅၀၀) နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ယင်းသို့ တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှု-ယဉ်ကျေးမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေကြသော မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမားများ အခွင့်အလမ်းများ ကာကွယ်မြှင့်တင်ရေးအတွက် ဆက်လက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရေး၊ နယ်စပ်ဒေသတစ်လျှောက်ရှိ ပြည်နယ်များအကြား ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု မြှင့်တင်ရေး၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြန်မာအစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းနေမှုများကို အထောက်အကူပြုရေးအတွက် လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး စသည့် လုပ်ငန်းများ အခြေခံသည့် စံပြကျေးရွာများ တည်ဆောက်ရေး၊ ပြည်သူအချင်းချင်းအကြား ထိတွေ့ ဆက်ဆံမှု မြှင့်တင်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား ရေလုပ်ငန်းကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ မြန်မာ အလုပ်သမားများ၏ စွမ်းရည် မြှင့်တင်ရေး အတွက် အသက်မွေးမှုပညာ သင်တန်းကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်ရေးတွင် ထိုင်းနိုင်ငံမှ အကူအညီပေးရေးကိစ္စများ အပါအဝင် ဘက်စုံကဏ္ဍစုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို နှစ်နိုင်ငံအကြားတွင်သာမက ဒေသတွင်းနယ်ပယ်၌ပါ ပိုမိုတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်သွားရေးအတွက် နည်းလမ်းများ ရှာဖွေရန် ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့သည် ယင်းနေ့ (၁၈၃၀) နာရီအချိန်တွင် အမ်ဂယ်လာရီ (ဆိုဖီတယ်လ်) ဟိုတယ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် မြန်မာ-ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံအကြား သံတမန်ဆက်သွယ်မှု ထူထောင်သည့် နှစ်(၇၀)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။